Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica zutere onye nnọchi anya Canada ọhụrụ na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica zutere onye nnọchi anya Canada ọhụrụ na Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Onye nnọchi anya Canada dị elu na Jamaica na Minista njem nlegharị anya Jamaica
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na-ewetara Jamaica, Onye Ọchịchị Kasị Elu ọhụrụ Emina Tudakovic, (lee aka ekpe na foto) na ekele pụrụ iche.
Nna -ukwu Tudakovic zutere Hon. Minista Bartlett n'ọfịs New Kingston ya.
Ha kwurịtara ụzọ isi mee ka mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ a sie ike na mpaghara dịka agụmakwụkwọ na ọzụzụ.
Ọzọkwa na tebụl bụ ohere nke Canada na Jamaica imepe oghere satịlaịtị nke Global Tourism Resilience na Crisis Management Center.
Ihe omume a bụ nkwanye ugwu site n'aka Onye Ọchịchị Tudakovic na Mịnịsta ahụ na Ọgọst 11, 2021, n'ọfịs New Kingston ya.
N'oge nzukọ ha, ha tụlere ụzọ isi mee ka mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ a sie ike na mpaghara dịka agụmakwụkwọ na ọzụzụ. Ha kwurịtara na ọ ga -ekwe omume na Canada na Jamaica ga -emepe oghere satịlaịtị nke Global Tourism Resilience na Crisis Management Center.
The Jamaica Mịnịstrị na -ahụ maka njem na ụlọ ọrụ ya na -arụ ọrụ ịkwalite ma gbanwee ngwaahịa njem nlegharị anya nke Jamaica, ebe ha na -ahụ na uru ndị na -esite na mpaghara njem na -abawanye maka ndị Jamaica niile. Iji mezuo nke a, o tinyela atumatu na atụmatụ ga -enye ohere maka njem nlegharị anya dị ka injin uto maka akụ na ụba Jamaica. Ministri a na -agbasi mbọ ike ịhụ na mpaghara ndị njem na -enye nkwado zuru oke maka mmepe akụ na ụba Jamaica n'ihi nnukwu ego ha nwere.
Ozi ndị ọzọ na Jamaica.
October 20, 2021 na 13: 38
شات عراقي دردشة عراقية شات صوتي دردشة العراق